ABO’n magaalaa Baakkootti uummata waliin marii bal’aa gaggeeffate! Gufuunis mudate – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsABO’n magaalaa Baakkootti uummata waliin marii bal’aa gaggeeffate! Gufuunis mudate
Addi Bilisummaa Oromoo uummata isaa waliin guyyaa har’aa Gurraandhala 8,2020 marii bal’aa magaalaa Baakkootti taasise. Marii kana irratti hawwaasi bal’aan magaalaa Baakkoo kan argaman, dargaggoof maanguddoota naannichaa dabalatee hirmaattonni danuun argamanii jiran. Waltajjii marii kana irratti Hogganni Olaanaa ABO MSHG-GS ABO jaal Abdii Raggaasaa, Qondaalli ABO Kolooneel Gammachuu Ayyaanaa, Qondaalli ABO jaal Gadaa Gabbisaa, Qabsooftuuf artist kabajamtuu Ilfinash Qannoo dabalataan wellistoota jaallatamoo Wellisaa Falmataa Kabbadaa, Wellistuu Jiituu Daanyee, Wellisaa Caalaa Daggafaa, Wellistuu Hawwii H. Qananii argamuudhaan sagantaa kana miidhaksanii jiran. Dabalataan miidiiyaaleen akka OMN, ONN fi SQ sagantaa kana irratti argamanii jiru.
Waltajjiin marii hawwaasaa magaalaa Baakkoo kun eebba Maanguddoon kan baname yoo ta’u, jaal Hayiluu Nagarii gaafatamaa Waajjira ABO Baakkoo! Kan ta’an hawwaasaaf hirmaattota sagantichaa galateeffachuudhaan saaqinsa sagantichaa taasisanii jiru.
ABO’n maal jedha?
Hogganni olaanaa ABO jaal Abdii Raggaasaa uummataaf hogganoota ABO bakka sanatti argamaniif ergaa baga nagaan dhuftanii erga taasisaniin booda, “akka dhaabaatti (ABO) biyya kana keessa nagaan sochoonee qabsoo gochuudhaaf ayyama qabna!” Kan jedhan jaal Abdiin, seeraaf heera biyya kanaa eegnee socho’uu qabna ergaa jedhu dabarsanii “miseensonni keenya bilisaan socho’anii uummata ijaarrachuuf qabsoo gaggeessuu qabdus” jedhanii jiran. Godinaalee Oromiyaa biroo keessatti ABO’n akkuma kana hawwaasa dubbisaa jiraachuu erga himanii, Jaal Abdiin “Heeraafi seera biyya kanaa eegnee sochoonee, hanga qabsoo karaa nagaa gaggeessinutti sababni nuti sodaannuuf hinjiru. Hinsodaannu yoon jedhu seera biyya kanaa cabsina jechuu miti” jedhan.
Magaalicha keessatti sababa waltajjii ABO walitti bu’iinsa waraanni mootummaa har’a dhalche eeruun kan dubbatan jaal Abdiin “akka seeraaf heeraatti silaa waliitti bu’iinsi kun hinbarbaachisu” erga jedhanii, Addi Bilisummaa Oromoo madda yaaddoo akka hintaane kan himan hogganni olaanaa ABO jaal Abdiin “Foolisoonni fi bulchitoonni as jirtan qabsoo karaa nagaa kana keessatti nagaa uummataa tiksuuf gahee qabdu. Foolisoonni asiis bulchotoonnis ilmaan Oromiyaati. Namni har’a ciminaan uummata isaa tajaajile boris uummata isaa tajaajila. Barsiisaan har’a uummata isaa barsiisu, boris uummata isaa barsiisa. Qaamni uummataaf har’a hojjetu kamuu bor uummataaf hojjechuu kan isa daangeessu hinjiru” jedhan MSHG-GS ABO jaal Abdii Raggaasaa.
“Sabootniif sablammoonni Oromiyaa keessaa nageenyi isaanii kabajamee Oromiyaa keessa akka jiraatan hojjetna malee akka nurratti hololan sanas miti” jedhu jaal Abdiin. “Dhaabni, Qaamni fedheyyuu humnaan biyya kana bulchuu hindanda’u. Yoo humnaan bulchina jedhanis dammaqinsi uummata keenyaa eenyuuf hinayyamu” jedhan
Dhimma gamtaa’ina paartilee Oromoo irratti haasaa taasisaniin paartilee Oromoo waliin gamtaa’ina uumanii turuuf gaaddisa hoggansaa Oromoo akka yaadamutti hojjechuu baatullee ijaaramee turuu dubbatan. Dhimma kana irratti jabeessanii kan dibbatan jaal Abdiin paartilee sadii waliin gamtaa uumanii waraqaa Boordii filannoof barreessuun deebii eeggachaa akka jiran himani. “ABO’n paartii KFO fi PBO waliin walii galtee gochuuf haasaatti jira. Walii galteen kun walii galtee dhugaa ta’uu qaba. Waliigaltee jallinaa, walii galtee cubbuu qabu, walligaltee Oromoo bool’a buusu addi Bilisummaa Oromoo hinfudhatu” jedhan. ABO’n paartii mootummaa waliin hojjetu duukaas haasaa taasisaa akka jiruuf, isaanis Oromoo waan ta’aniif akka haasofsiisan himan. Paartilee halagaa kanneen mirga hiree murteeffannaa uummata isaaniitti amanan 12 walinis ABO’n walii galtee uumuu himaniiru. Akka ibsa jaal Abdii kanatti ABO paartii Oromoo kam waliin haasa’uufi akkasuma uummata Oromoo gara tasgabbiif nagaatti geessuuf qabsoo taasisaa jiraachuudha.
“Nagaa fi dhugaan halkan tokko adda baatee buluu hindandeessu!” kan jedhan qondaalli ABO Koloneel Gammachuun saganticharratti dubbii dubbataniin “saba guddaa Oromoo kan uume waaqadha” erga jedhanii “dhugaan saba kanaa deebi’uu qaba. Dhugaan Oromoo deebi’uu yoo baate sabaaf sablamnii Xoophiyaa qofa utuu hintaane, gaanfa Afrikaatu nagaa dhaba!” jedhan. Qondaala ABO jaal Gadaa Gabbisaa “Miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo dabeessa miti jagna. Kanaafuu jagna ta’aa. Yoo jabaanne addunyaan nu dhageessi” jedhan.
Paartilee Xoophiyaa leellisan kanneen Oromoo keessaa dhalatan irratti ka dubbatan Jaal Gadaan”Dura Meison tu ture. Hogganaan Meison Hayilee ture. Bara sana ABO’n Karaa Xoophiyaa osoo hintaane Oromoo taanee afaan keenyaan dubbannee qabsoofna, malee daandii Xoophiyaa hindeemnu jedhe ture. Hayileen sana didee daandii Xoophiyaa irratti miidhame. Hayileen ergasii utuun Oromiyaaf falmeera ta’ee jedhe erga haalli itti hammaattee. Karaan nuti ittin boqonnu, karaan nuti itti nagaa argannu karaa ABO ti. Kanaaf ABO jabeeffadhaa” jedhan Qondaalli ABO jaal Gadaa Gabbisaa
Kolooneel itti fufanii kan dubbataniin “Oromoon waa 3 ta’uu qaba. Tokko jaallatamuu, saalfatamuu, didan ammoo sodaatamuu qaba.” Jedhan qandaalli ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa
“Karaa nagaa yoo ta’es goota ta’uu qabna, karaa biraa yoo dhufames hinsodaannu!” kan jedhan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, dhaamsa Qeerroo Bilisummaa Oromoof dhaamaniin “utuu isin jirtanii Baaroo Tumsaa du’aa ka’ee lammata dhalachuu hindanda’u! Lammata du’aa ka’ee hindu’u! Kanaaf qabsootti jabaadha” Jedhan. “Adda godhadhaa, injifadhas!” Jedhan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa
Gama isaan “Baakko jirtu miti, kaambii ABO keessa kan jirtan” erga jedheen booda Qondaalli ABO jaal Gadaa Gabbisaa, “jirtuu jechi jedhu akka itti dhufe qaba.” Jechuudhaan “bara Mallas WBO’n hinjiru jennaan, akka jiru WBO’n agarsiise. San booda “WBO jirtuu? Jirraa, jirraa” Dhaadannoo jedhu eegale. Kanaafuu abbaan barbaade mana qabalee keessatti dhufee ‘jirtuu?’ Isiniin jedheef jirra hinjedhinaa” jedhanii jiru. Sagantaa kana irratti Abdii Internaashinaal Tekandoo argamanii agarsiisa bareedaa taasisanii jiran.
Gagaa (Geetuu) kan jedhamu, abbaa Kaameraa ONN kan ta’e waraanni mootummaa “maaliif marii hawwaasaa waraabda?” jechuun rukutanii jiran. Dargaggoota hedduus uleedhaan reeban. Sagantaa sana irratti hoggana ABO irratti dhukaasa banan.
Suuraaf gabaasi kan Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ) ti
[Gurraandhala 8,2020]”Oromoon waa 3 qabaachuu qaba. Tokko jaallatamuu, saalfatamuu, didan ammoo sodaatamuu qaba.” Jedhan qandaalli ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa
Gurraandhala 8,2020 Baakkootti hogganni ABO maal jedhan?
[SQ, Gurraandhala 9,2020] Hogganni olaanaa ABO jaal Abdii Raggaasaa uummataaf hogganoota ABO bakka sanatti argamaniif ergaa baga nagaan dhuftanii erga taasisaniin booda, “akka dhaabaatti (ABO) biyya kana keessa nagaan sochoonee qabsoo gochuudhaaf ayyama qabna!” Kan jedhan jaal Abdiin, seeraaf heera biyya kanaa eegnee socho’uu qabna ergaa jedhu dabarsanii “miseensonni keenya bilisaan socho’anii uummata ijaarrachuuf qabsoo gaggeessuu qabdus” jedhanii jiran. Godinaalee Oromiyaa biroo keessatti ABO’n akkuma kana hawwaasa dubbisaa jiraachuu erga himanii, Jaal Abdiin “Heeraafi seera biyya kanaa eegnee sochoonee, hanga qabsoo karaa nagaa gaggeessinutti sababni nuti sodaannuuf hinjiru. Hinsodaannu yoon jedhu seera biyya kanaa cabsina jechuu miti” jedhan. Magaalicha keessatti sababa waltajjii ABO walitti bu’iinsa waraanni mootummaa har’a dhalche eeruun kan dubbatan jaal Abdiin “akka seeraaf heeraatti silaa waliitti bu’iinsi kun hinbarbaachisu” erga jedhanii, Addi Bilisummaa Oromoo madda yaaddoo akka hintaane kan himan hogganni olaanaa ABO jaal Abdiin “Foolisoonni fi bulchitoonni as jirtan qabsoo karaa nagaa kana keessatti nagaa uummataa tiksuuf gahee qabdu. Foolisoonni asiis bulchotoonnis ilmaan Oromiyaati. Namni har’a ciminaan uummata isaa tajaajile boris uummata isaa tajaajila. Barsiisaan har’a uummata isaa barsiisu, boris uummata isaa barsiisa. Qaamni uummataaf har’a hojjetu kamuu bor uummataaf hojjechuu kan isa daangeessu hinjiru” jedhan MSHG-GS ABO jaal Abdii Raggaasaa.
“Nagaa fi dhugaan halkan tokko adda baatee buluu hindandeessu!” kan jedhan qondaalli ABO Koloneel Gammachuun saganticharratti dubbii dubbataniin “saba guddaa Oromoo kan uume waaqadha” erga jedhanii “dhugaan saba kanaa deebi’uu qaba. Dhugaan Oromoo deebi’uu yoo baate sabaaf sablamnii Xoophiyaa qofa utuu hintaane, gaanfa Afrikaatu nagaa dhaba!” jedhan
Haasaa Kolooneel Gammachuun Gurraandhala 8,2020 Baakkootti taasisan guutummaasaa!
Kolooneel Gammachuu Ayyaanaa